PVTV ၏ သတင်းကဏ္ဍ (၁၆ ဇွန် ၂၀၂၁)… – PVTV Myanmar
PVTV ၏ သတင်းကဏ္ဍ (၁၆ ဇွန် ၂၀၂၁)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၁) ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း
ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ရေးနေ့ ကမ်ပိန်း၏ အကြိုအစီအစဉ်အဖြစ် ဇွန်လ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇ရက်များတွင် ၃ရက်တာ ဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းများကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ သတင်း
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက သားဖွားဆရာမများနှင့် သားဖွားသင်တန်းသူများအတွက် ပညာရေး အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ သတင်း စတဲ့ သတင်းအကြောင်းအရာတွေကို တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 6.5K Share – 507
Sam Pang Ao says:
2021-06-16 at 10:03 PM
Tinzaw Oo says:
Khaing Gyi Htoo says:
တိုက်ပွဲ​ခေါ်မှာဘာရည်ရ့ယ်ချက်နဲ့​ခေါ်မလဲ စစ်အုပ်စုကိုအမြစ်ပြတ်တိုက်မှာလား ဖိအား​ပေး​ဆွေး​နွေးမှာလား​ဝေ​ဝါး​နေတယ် ၂ခုထဲ က၁ခု သံ၂ကွဲ၂ ချပြပါ
Ko Tin Myint says:
2021-06-16 at 11:39 PM
အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအဖျက်သမားများအား အားလုံးတူညီလက်တွဲတိုက်ခိုက်သုတ်သင်ချေမှုန်းဘို့ အရာရာကို ပြင်ဆင်ထားကြရမဲ့ အချိန် standby အဆင့်ကို ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရောက်ပြီလား? တိုက်ပွဲဝင်မဲ့လူအင်အား ? သေနတ်? …………။အမြင်မှာ သွေးအေးနေသူတွေ နေ့စဥ်စားဝတ်နေရေးမပြေလည်လို့ ရုန်းကန်နေသူတွေ ဘာမှမဖြစ် မဆိုင်သလိုနေသူ တွေ့ကြမှာပါ ဒါတွေဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေးအရှိန်ကို အနည်းအများထိခိုက်ပါတယ် ဥပမာ CDM တွေအင်အားလျော့လာတယ်……သတိပြုကြပါ …….။
2021-06-17 at 4:16 AM
2021-06-17 at 4:17 AM
2021-06-17 at 5:13 AM
ကမ္ဘာ့ ဥပဒေ တော့ ရှိ့မှာ ပေါ့
Kyi Thar Aung says:
2021-06-17 at 5:39 AM
လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ရှိထားတဲ့ ခွေးတပ်ကောင်စီ လူသတ် အကြမ်းဖက် နေတဲ့ခွေးသူခိုး NUGအစိုးရကိုပုပ်ခတ်ဆော်ကား ခွေးမသား
2021-06-17 at 8:00 AM
U Wa Ra Mi says:
2021-06-17 at 9:52 AM
ေဆာင္းခ်စ္သူ ေဆာင္းခ်စ္သူ says:
Pann Sakar says:
2021-06-17 at 3:54 PM
2021-06-17 at 5:30 PM
2021-06-18 at 10:45 AM
ကြၽန္ေတာ္ေလး ရခိုင္ရာ says:
2021-06-18 at 5:30 PM
Myo Mi says:
2021-06-23 at 9:35 AM